Akpata na kaadị ebe nchekwa ure
Olee otú naghachi furu efu foto site na a emerụ kaadị ebe nchekwa
Video nkuzi nke rụrụ arụ na kaadị ebe nchekwa mgbake
1 akpatara kaadị ebe nchekwa ure
Ọ bụrụ na ị kwadoo gị faịlụ n'oge na-adịbeghị, a rụrụ arụ na kaadị ebe nchekwa nwere ike tinye dị oké ọnụ ahịa photos n'ihe ize ndụ. Iji gbochie gị kaadị ebe nchekwa site na-emerụ, ị ga mma ma ihe mere ọ na-emerụ na esi zere ya. Na-agụ na ma cheta ya.
»Gbanyụọ gị igwefoto mgbe foto na-agafere kọmputa gị ma ọ bụ
Anglịkan;» View photos mgbe e nwere ndị ka photos na-agafere ma ọ bụ dere;
»idaputa kaadị ebe nchekwa gị mgbe igwefoto ka
bụ;» Were photos na a ala batrị ;
»Gbaa ọzọ foto mgbe onye mbụ a ka
na-dere;» Nọgide gbaa na ihichapụ foto mgbe kaadị nchekwa juru eju;
»Jiri kaadị ebe nchekwa dị iche iche ese foto na-enweghị formatting
ya;» ka na-eji na kaadị ebe nchekwa na-egosi nsogbu n'ihu.
2 Olee naghachi furu efu foto site na a emerụ kaadị ebe nchekwa
Ọ bụrụ na ị ka chọrọ ịrụzi emerụ kaadị ebe nchekwa, ụzọ eji ọtụtụ bụ Ọkpụkpọ na kaadị. The ọjọọ ozi ọma na-formatting ga-akwụsị niile ọdịnaya, mgbe ndị ezi-ekwu bụ na i nwere ike iji kaadị gị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị eme atụmatụ ịzụta ọhụrụ kaadị ebe nchekwa, ị nwere ike họrọ-alaghachi azụ ọdịnaya site na gị rụrụ arụ kaadị ebe nchekwa. Ihe niile ị chọrọ bụ foto mgbake usoro.
My nkwanye: Wondershare Photo Iweghachite, ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac.
Gbalịa free ikpe mbipute a rụrụ arụ na kaadị ebe nchekwa mgbake software ugbu a n'okpuru.
Ma nke foto mgbake software eme ka i nwee:
»Naghachi ehichapụ foto site na ebe nchekwa
kaadị» Naghachi furu efu foto site na ebe nchekwa kaadị
»Naghachi formatted foto site na ebe nchekwa
kaadị» Naghachi foto site na keerughi, unreadable, mebiri emebi, ma ọ bụ nkwarụ ebe nchekwa kaadị
Step1 Jikọọ gị emerụ kaadị ebe nchekwa na kọmputa
Bido site na njikọ gị rụrụ arụ na kaadị ebe nchekwa na kọmputa na a kaadị agụ, ma ọ bụ na jikọọ gị igwefoto na eriri USB. Mgbe ahụ malite usoro ihe omume na pịa "Malite" na-amalite rụrụ arụ na kaadị ebe nchekwa data mgbake.
Step2 iṅomi gị rụrụ arụ na kaadị ebe nchekwa
Họrọ kaadị ebe nchekwa na pịa "iṅomi" button na-amalite ịgụ isiokwu.
Step3 Preview na-agbake foto site na rụrụ arụ na kaadị ebe nchekwa
Mgbe iṅomi okokụre, ị nwere ike ihuchalu recoverable photos otu otu ikpebi nke ị chọrọ naghachi. Mgbe ahụ ego ndị photos na pịa "Naghachi" ịrụ a emerụ kaadị ebe nchekwa mgbake na-azọpụta ndị furu efu photos na kọmputa gị.
Rịba ama: Unu ịzọpụta natara data na gị rụrụ arụ na kaadị ebe nchekwa ọzọ. Chọta ebe ọzọ n'ihi na ọ dị ka na kọmputa gị ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga disk, maka nchekwa hà.
3 Video nkuzi nke emerụ kaadị ebe nchekwa mgbake
> Resource> Naghachi> Olee naghachi Lost Photos si emerụ nchekwa kaadị